Highway Guardrail, W Doo Guardrail, Nche Rail - Huiquan
Okporo Highzọ Awara Awara
Huiquan Okporo ụzọ Lọ ọrụ
Guzobe na 2006, Shandong Guanxian Huiquan Traffic Facilities Co., Ltd. dị na Guanxian New Century Industrial Mpaghara, Shandong Province. Ulo oru edebara aha ulo oru nke 20 nde CNY, kpuchitere ebe ihe dika 43,290 square. Anyị bụ otu n'ime keukwu kwadoro ụlọ ọrụ na ọkachamara na mmepụta, ahịa nke na-ekpo ọkụ itinye kpaliri kpaliri guardrail.
Ilọ ọrụ okporo ụzọ Huiquan
A kọwara kọwaa ndị ahụ na ANSI B1.13M maka nnabata nke 6 g. Mkpọchi ihe na-kwekọọ ASTM ...
Ederede a bụ isi iji soro AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 na ọkọlọtọ EN1317. Ihe ...
C udi post
W doo nchebe
Nchebe ahụ bụ isi iji soro AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 na ụkpụrụ EN1317. Ute ahụ ...
H ọdịdị post
Ihe maka nke ahụ bụ Q235B (S235Jr mkpụrụ ike karịrị 235Mpa) na Q345B (S355Jr mkpụrụ ike karịrị 345Mpa).
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na-eso AASHTO M232 na nha anya dịka AASHTO M111, EN1461 wdg. A na-etinye post ahụ n'ime ihe mgbakwasị ahụ, iji kwado ma kwado nchekwa ahụ. O nwere ike belata ike mmetụta mgbe ihe ọghọm ahụ tara.
Nkwụsị njedebe bụ isi ịgbaso AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 na ọkọlọtọ EN1317. Ihe maka nke ahụ bụ Q235B (S235Jr mkpụrụ ike karịrị 235Mpa) na Q345B (S355Jr mkpụrụ ike karịrị 345Mpa).
A kọwara kọwaa ndị ahụ na ANSI B1.13M maka nnabata nke 6 g. Ihe mkpọchi kwekọrọ na ASTM F568M maka klas 4.6. Ihe maka corrosion na-eguzogide ọgwụ bolts na ASTM F 568M maka Klas 8.83. bolts. Ọgwụgwọ elu ga-eso AASHTO M232.
ỌH NEWR C ZLỌ ỌHUNTRND NDLỌ ỌR OF nke GUAN, LIAOCHENG, SHANDONG PRAN, CHINA